Bangalore sy Ooty Tour Antsoy @ + 91-993.702.7574 ho an'ny fandefasana.
Bangalore sy Ooty Tour
Bangalore Manana fiovaovana mahafinaritra mandritra ny taona iray manontolo izany ary izany no mahatonga azy ho manokana. Ny havoanan'i Ooty eo akaiky dia misy toerana mahatalanjona mahatalanjona, izay mahatonga anao hankahala ny hatsaran-tarehiny. Ny Bangalore sy ny Ooty Tour dia hitondra anao manerana ny renivohitra sy ny "Queen of hill stations". Amin'ny lafiny iray, ny fahambonian'i Botanical Gardens any Bangalore dia mamela ny mpizahatany ho resy ary amin'ny lafiny iray, ny zaridaina Rose of Ooty dia manala azy ireo. Raha toa ianao ka mitady olona manana traikefa toy izany dia tokony handray ny Bangalore sy ny Ooty Tour ianao. Ny fonosana 5D / 4N Bangalore sy Ooty Tour dia manome fahafaham-po anao ny fahatsaran-tarehin'ny toetoetra. Mankanesa ao amin'ny trano maoderina sy ny tempolin 'i Mystika sy ny tsangambato. Ooty izay misy zaridaina Botanika, havoana maitso matevina ary voninkazo tsara tarehy. Ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra eto amin'ity firenena ity dia tafiditra ao amin'ny Bangalore sy Ooty Tour. Ny fonosanay dia mirakitra ny toerana rehetra izay hodiavinao.
Programan'ny 04 Nights | Tour Code: 035.
Mankanesa any Bangalore, mandeha fiara mivantana mankany Mysore eo am-pitadiavana ny Lapan'ny Summer Tipu sy Fort ao Srirangapatna. Hiditra ao amin'ny Hotel. Ny alina.
Taorian'ny fandehanana mitsidika ny Mysore an'i Mysore izay mandrakotra ny Lapan'ny Mysore, ny Chamundi Hill & Tempoly ary ny Devaraja Market, taty aoriana mankany Ooty
Taorian'ny sakafo maraina dia mitsidika ny Botanical Garden, Lake and Doddabetta Peak. Hotel Overnight
Rehefa avy nandehanan 'ny sakafo maraina ho any Bangalore, rehefa hiditra ny hotely. Ny hariva dia mandehandeha any Bangalore mandritra ny antsasak'adian'ny tanàn-dehibe, anisan'izany ny Tempolin'i Bull, Lalbagh, Botanical Garden ary ny fiara handalo an'i Vidhana Soudha, Hotel Overnight.
Aorian'ny fandehanan'ny sakafo maraina dia mandehandeha mankany amin'ny Railway Station Bangalore na any amin'ny seranam-piaramanidina mba hisambotra ny sidina ho an'ny toerana manaraka.